हँ,,,, २ सय वर्ष पुरानो व्यक्ति !!!!!
कालिका माघ २७–
के तपाई विश्वास गर्न सक्नु हुन्छ, कोही व्यक्ति दुई वर्ष सम्म चिहानमै चुपचाप रहन सक्ला ? त्यो पनि उसको मृत्यु नभई । सुन्दा अचम्म नै लाग्छ है, तर केही यस्तै सार्वजनिक भएको छ । जसलाई हरेकले आ–आफ्नै नजरले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
मिररको खबर अनुसार हालै मंगोलियाको उलन बेटर नामको एक शअरमा मेडिटेशनको चिहानमा एक दुई सय वर्ष पुरानो व्यक्ति फेला परेको छ । ती व्यक्ति कुनै ममी जस्तै देखिएको छ । यो अहिले सम्म प्रमाणित हुन सकिरहेको छैन की व्यक्ति जीवितै छ या उसको मृत्यु भैसकेको छ ।
स्वयम् बैज्ञानिकहरुकै लागि यो एक पहेली जस्तै बन्न पुगेको छ । किनभने भेटिएको ती व्यक्ति एकदम गहिरो ध्यानमा केन्द्रित भएको जस्तै देखिएको छ । वास्तवमा ती व्यक्ति एक तिब्बती भिक्षु रहेछन् । भेटिएको व्यक्ति या भनौ ममीको अध्ययनका लागि उलककै फोरसिक एक्सपर्ट सेन्टरमा पठाइएको छ ।
यस्तै अर्को तर्फ मंगोलियन इंस्टिच्युट अफ बुद्धिस्ट आर्टको फाउण्डर ग्यागोविन पुरेबापतले कुनै गहिरो ध्यानमा रहेको लामा भनी अनुमान गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार कुनै लामा मात्र यसरी गहिरो ध्यानमा रहन सक्छ । यस घटनाको वास्तविकता के हो त्यो एक भुलभुलैया जस्तै भैरहेको छ । साथै यसको गहन अध्ययन पनि जारी छ । ( एजेन्सीको सहयोगमा )